Raw MT2 (Melanotan-II) ntụ ntụ (121062-08-6) Ndị na-emepụta - Phcoker
Raw MT2 (Melanotan-II) ntụ ntụ bụ heptapeptide cyclic synthetic, analog nke alpha-melanotropin (4,10); ike ………
MT2 (Melanotan-II) ntụ ntụ (121062-08-6) video
MT2 (Melanotan-II) ntụ ntụ (121062-08-6) Nkọwapụta
Melanotan II (MT-2) bụ peptide sịntetik, analogue nke homonụ sitere n'okike na-eme ka melanocortin tan mepụta (melanin site na melanocytes, nke na-ekpebi ma na-eme ka tan), si otú a belata ihe ize ndụ nke mmebi anyanwụ na ndị ọzọ mmetụta ọjọọ nke radieshon na solarium.
A na-eme MT-2 peptide a iji mee ka mmeghachi ahụ dị na UV ray dị ukwuu, n'ihi na mmepụta melanin na-achọkarị ikpuchi anyanwụ ka ọ dị mkpa iji nweta mmetụta kachasị tanning. Nke a bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị nwere akpụkpọ anụ ahụ na-acha ọkụ n'ahụ n'ebughị ụzọ nọrọ ọtụtụ izu na anyanwụ wee gafere usoro ọkụ na ọgwụgwọ.
Ndị ọrụ MT2 na-enweta tanning ọsọ ọsọ na ọgwụgwọ ngwa ngwa nke anwụ mebiri sel anụ ahụ. N'ihi nke a, melanotan II ọ kachasị mma maka ndị akpụkpọ ahụ bụ icha mmirimmiri (ụdị 1 & 2 nke anụ ahụ) ma na-ewekarị ọkụ na anyanwụ.
Banyere usoro ọgwụgwọ nke Melanotan II ， usoro nnabata ọkọlọtọ na-egosi ị takingụ otu ọgwụ ntụtụ Melanotan II na ọnụego 1 mg (a chọghị ọnụ ọgụgụ kwa kilogram, dị ka usoro onyonyo si dị iche), bido na 250mkg otu ụbọchị na n'ime ụbọchị 4 gbakwunye 250mkg ọzọ nwayọ. N'ụbọchị nke anọ, mee ka ọgwụ ahụ dị elu ruo 1mg ma rapara n ’ọkwa a ruo mgbe a ga-enweta tan chọrọ. Nkọwa ndị ọzọ gbasara ịzụta Melanotan II (MT-2) na ntanetị, biko egbula oge ịgwa anyị onye na - enye ndị ahịa ahịa - peptide.
MT2 (Melanotan-II) ntụ ntụ (121062-08-6) Smmezi
Product Name MT2 (Melanotan-II)
Chemical Aha Melanotan II; MelanotanII;
usoro Ac-Nle-cyclo (Asp-His-DPhe-Arg-Trp-Lys) -NH2
Klaasị ọgwụ ọjọọ peptide
molekụla Fnhazi C50H69N15O9
molekụla Wasatọ 1024.198 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 1023.54 g / mol
Mgbu Point > 181 Celsius C (subl.)
Fna-agbanyeghachi Point ≥17.0
Ọkara Ndụ nke Ndụ 33 hour
Sịkwa akwa Tigwe -20 ° C
Antinye A na-eji nnu acetate nke Melanotan II mee ihe iji mụọ ihe ndị na-emechibido ihe oriri na ume ike na oke.
Melanotan II Acetic Acid Nnu, bụ ọgwụ e ji arụ ọrụ na-emepụta nke yiri nke hormone dị na ndị mmadụ. Melanotan II e gosipụtara melanogenesis (tanning) na mmetụta aphrodisiac na ụmụ mmadụ.